Ogaden News Agency (ONA) – BAAQ IYO CAMBAARAYN KA TIMID ODOYADA, AQOONYAHANKA, IYO WAXGARADKA JAALIYADA SOOMAALIDA OGAADEENYA EE MINNESOTA, AMEERIKA
BAAQ IYO CAMBAARAYN KA TIMID ODOYADA, AQOONYAHANKA, IYO WAXGARADKA JAALIYADA SOOMAALIDA OGAADEENYA EE MINNESOTA, AMEERIKA
Posted by ONA Admin	/ July 21, 2014
Sabti, Luulyo 20, 2014
Kulan xogwaraysi, wadatashi, iyo go’aanqaadasho isugu jira oo Odayada, Siyaasiin, aqoonyahan, iyo waxgaradka Jaaliyada Soomaalida Ogaadeenya isugu yimaadeen ayaa ka dhacay Xafiiska Jaaliyada ee Minneapolis, Minnesota Dalka Maraykanka. Kulankan oo ahaa mid aan kulamada joogtada ah ee Jaaliyada ka mid ahayn ayaa waxaa Iyana ka soo qayb galay Madaxda Jaaliyada Minnesota, iyo Masuuliyiin ka tirsan ururka JWXO. Ujeedada ugu wayn ee kulanka ayaa ahaa mid ku wajahan saddex arimood:
Xog waran Halganka iyo marxaladaha uu ku jiro wakhtigan xaadirka ah,
Qorshayaasha dulmiga iyo naxliga xambaarsan ee guumaysigu uu baryahan dambe ka wado dalalka Bariga iyo Geeska Afrika, iyo
Wadatashi si halganka loo xoojiyo.
Masuuliyiinti JWXO ee shirka qayb galay ayaa ahaa mudanayaasha kala ah; Ugaas Axmed Ugaas Maxamed Ugaas Cabdi (Majeerteen), Xassan Ciise Maxamuud (Sheekeeye), Maxamuud Nuur Axmed, iyo Masuuliyiinta Jaaliyada Minnesota oo uu Gudoomiyaha Jaaliyada Cabdinaasir Xirsi (Gaani.) Masuuliyiinta ayaa warbixino tibaaxayey gude, dibad, iyo guud ahaan halganka ay hogaaminayso Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya ee caskariyan, iyo siyaasiyan la wadaagay ka qayb galayaashi kulanka.
Dhinaca kale, masuuliyiintu waxay bixiyeen warbixin kooban oo ku saabsan dhacdooyinki dilalka qorshaysan ahaa ee ka dhacyey dalka Kenya. Dilalkaas oo ahaa kuwo uu Guumaysatada Itoobiya oo naca iyo dulmiga Soomaalida Ogaadeenya mashruuc camali ah ka dhigatay. Masuuliyiintu waxay ugu dambayn u ifiyiin ka qayb galayaashi kulanka qorshaha, iyo ujeedada ay Xabashidu ka leedahay dilalkan qorshaysan oo ah kuwo naf-la-caari ah oo ay miciin biday Itoobiya markay ku guuldaraysatay inay joojiso dagaalada joogtada ah ee ay naftood hurayaasha Ciidanka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya ku burburinayaan Ciidanka maxaysatada ee Itoobiya ay ka soo qafaashay Qowmiyadaha ku dulman xukunka Xabashida.
Odayadi, aqoonyahanki, waxgaradki, iyo siyaasiinti kulanka yimid ayaa Iyana si fiican goobti uga hadlay, iyagoo si cad farta ugu fiiqay Halganka Ogaadeenya ka socda ee ay shacbiga iyo Ciidanka JWXO oo iskaashanaya uu yahay mid xaqa. Xaquna inuu mar walba cadowyo leeyahay, guushuna inay ku dambayn kuwa xaq darada iyo dulmiga ka dhiidhiyaya. Ugu dambayn, waxay odayadi, cuqaashti, waxgaradki, aqoonyahanki, iyo siyaasiinti kulanka ka qayb gashay si wada jira oo isugu jira cambaarayn iyo digniin. Sidan ayeyna u soo jeediyeen baaqa iyo digninta:
“Hadii aanu nahay odayadi, cuqaashti, waxgaradki, aqoonyahanki, iyo siyaasiinti u dhalatay Ogaadeenya ee Minnesota, Dalka Maraykanka cambaarayn, nac, iyo cadhaba dusha kaga tuuraynaa guumaysatada Itoobiya oo xalaashatay dhiiga shacbiga aan waxba galabsan ee Ogaadeenya. Itoobiya, shacbigi ay soo qixisay ayey gaadmo fulaynimo ah kaga ugaadhsanaysaa wadamada Bariga iyo Geeska Afrika. Taasina ma aha mid uu shacbigu kaga tanaasulayo xaqiisa iyo aaya ka tashigiisa.” Digniin: “Hadii aanu nahay odayadi, cuqaashti, waxgaradki, aqoonyahanki, iyo siyaasiinti u dhalatay Ogaadeenya ee Minnesota, Dalka Maraykanka digniin u diraynaa dhamaan shacbiga Soomaalida Ogaadeenya inuu u midoobo, ka hortago, oo uu fashiliyo qorshayaasha xumaanta iyo naxliga qododa fog leh ee ay Itoobiya kula dhex wareegayso meeshi ay laba ruux oo Ogaadeenya u dhalatay ku aragto. Waa qorshe xumaan iyo cadaawad xambaarsan qorsha Guumaysatada Itoobiya ay wado waana in laga hortagaa si wada jir ah. Waana inaan sida ay Itoobiya doonayso iyo qorshaheed loo fulin ama loo fududayn. Qorsha has oo ah dagaal sokeeye, iyo is nac shacbiga wada dhashay ka dhex dhaca.
Guusha Shacbiga Ogaadeenya ee Xaq u dirirka ah ayaa leh. Guuldaraduna waxay ku dambayn Guumaysatada Itoobiya iyo kuwa xumaanta ku gargaaraya, xaqiiqaduna waa midaas ayey ku soo gebagabeeyeen odayadi, cuqaashti, waxgaradki, aqoonyahanki, iyo siyaasiinti u dhalatay Ogaadeenya ee Minnesota, Dalka Maraykanka.
Odayadi, cuqaashti, waxgaradki, aqoonyahanki, iyo siyaasiinti u dhalatay Ogaadeenya ee Minnesota, Dalka Maraykanka
Minnesota, Minneapolis, USA, Luulyo 20, 2014.